Posted by ကလိုစေးထူး at 4:29 AM
I am also so upset esp stubborn ppl.
Jun 30, 2008, 7:07:00 AM
ကိုစေးထူးရေ…. ဆောင်းပါးနဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတွေ၊ ရေးလက်စ သီချင်းတပိုင်းတစတွေ ပျောက်ဆုံးသွားတာ သိရလို့စိတ်မကောင်းပါဘူး…နောက်ဆိုbackupလုပ်ထားပါလား…စာတွေ ပုံမှန်နီးပါး ရေးဖြစ်ဦးမယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာစွာ စောင့်မျှော်နေပါတယ်….
Jun 30, 2008, 11:15:00 AM
ပျောက်သွားတဲ့ စာတွေအစားပိုကောင်းတဲ့ စာတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်း) စာတွေ ပုံမှန်ရေးမယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာတယ် အစ်ကိုရေ့ ....ရင်ထဲမှာ ပေါ့သွားတယ်ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့ ဖွင့်ချလိုက် သိမ်းထားရင် ရင်ခံတယ် ။
Jul 1, 2008, 1:49:00 AM